Moosend: အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အလိုအလျောက်။ Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, ဖေဖော်ဝါရီလ 17, 2019 တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 18, 2019 ဂျော့ခ်ျ Fakorellis
Moosend, ထိုချီးမြှင့် အီးမေးလ်စျေးကွက်နှင့်အလိုအလျောက်ပလက်ဖောင်း, အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအင်္ဂါရပ်များ, စျေးနှုန်းအစီအစဉ်များနှင့်၎င်း၏တသမတ်တည်း, ထူးချွန်ဖို့အပျနှံနှင့်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူငွေတန်ဖိုးကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ထားသော။
၈ နှစ်အတွင်း၊ Moosend ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအဆင့်မြင့်အေဂျင်စီများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများနှင့်တည်ထောင်ခြင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့သည် Ted-Xနှင့် ingအမည်ကိုမှအနည်းငယ်။
Moosend ဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးပလက်ဖောင်းဖြစ်ခဲ့သည် ISO-Certified နှင့် GDPR-လိုက်နာမှုထို့ကြောင့်ယင်း၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအသုံးပြုသူ ဦး တည်ချက်နှင့်အညီဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။
အီးမေးလ်တစ်ခုအနေနှင့်စတင်ခဲ့သည့်အရာသည်၎င်း၏နေရာကိုပေးသည် အီးမေးလ်စျေးကွက်နှင့်အလိုအလျောက်နှင့်ယခု AI ။
၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးအီးမေးလ်ပို့သောအခါသမိုင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယခု 1971 ခုနှစ်တွင်အီးမေးလ်သည်အစွမ်းထက်သောအသွင်ပြောင်းခဲ့သည် စျေးကွက်ဗျူဟာ အလျှော့ပေးလိုက်လျောခြင်း, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူများနှင့်နေ့စဉ်အသုံးပြုသူများအားဖြင့်အလုပ် 400% ရွယ်.
ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့င် အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာတိုးတက်လာသည် အကြီးအကျယ်ပြ,နာများတစည်းဖို့ကြီးမြတ်ဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူစျေးကွက်ရှာဖွေရေး။
အခြေခံအားဖြင့် အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်း သူတို့သည်သတင်းလွှာကိရိယာများသာမကစျေးကွက်သမားများနှင့်သူတို့၏ပရိသတ်များအကြားဆက်သွယ်ရေးကြားခံတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲလာသည်။
Moosend တတ်နိုင်သည် အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး software ကို ၎င်းသည်စျေးကွက်၏လိုအပ်ချက်များကိုကျယ်ပြန့်စွာဖုံးအုပ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်ဝယ်လိုအားများပြားသောဘတ်ဂျက်နှင့်အတူသေးငယ်သည့်ကုမ္ပဏီကြီးများအတွက်သင့်တော်သည်။
နှစ်တွေ Moosend သူတို့ရဲ့စာနာနားလည်မှုကိုအာရုံစိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ထူးခြားတဲ့ပံ့ပိုးမှု ၀ န်ဆောင်မှုတွေကြောင့်သူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေအကြားယုံကြည်မှုအလွှာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
၎င်းကိုအထူးဆော့ဝဲလ်ပြန်လည်သုံးသပ်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ချက်ချင်းအတည်ပြုနိုင်သည် ကွမ်းခြံကုန်း နှင့် G2Crowdအဘယ်မှာရှိသနည်း Moosend သည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ထိပ်တန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆော့ဖ်ဝဲများတွင်ပါဝင်သည်။
အီးမေးလ်စျေးကွက်အတွက် Moosend Solutions
Moosend ၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆော့ဝဲ Cloud-based ဖြစ်ပြီးစျေးကွက်ရှာဖွေသူများအားပရိသတ်နှင့်နက်ရှိုင်းစွာအဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပါ ရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိ interface ကို ၎င်းသည် tool မှတစ်ဆင့်သွားလာမှုကိုလွယ်ကူလွယ်ကူစေသည်။
သို့သော် Moosend ကိုထူးခြားစေသည့်အချက်မှာပမာဏနှင့်အမျိုးမျိုးသောအလိုအလျောက်သွင်ပြင်လက္ခဏာများအပြင်အပြိုင်အဆိုင်များပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောစျေးနှုန်းအစီအစဉ်များဖြစ်သည်။
ဒါဟာလုံးဝရှိကွောငျးဖော်ပြခဲ့တဲ့ခံရဖို့ရှိပါတယ် စာရင်းပေးသွင်းသူ ၁၀၀၀ အထိအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်မည့်အစီအစဉ်, ကြိုဆိုထက်ပိုသောအရာ။
Moosend သည်စျေးကွက်သမားတစ်ယောက်သည်သူ၏အားထုတ်မှုများကိုတိုင်းတာရန်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းနားလည်သည်။ ထို့ကြောင့်ပလက်ဖောင်းသည် A / B ခွဲထားသောစမ်းသပ်ခြင်းအင်္ဂါရပ်နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်ကိုပေးထားသည် analytics အစီရင်ခံစာများ သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများ၏အသုံး ၀ င ်၍ အသေးစိတ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးနိုင်ပါသည်။
A အသုံးပြုသူအတွက်လွယ်ကူသည့်၊ သင်သည်သတင်းလွှာကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း ဖန်တီး၍ အလွန်ရှုပ်ထွေးသောပြင်ပတည်းဖြတ်ရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကိုမလိုအပ်ဘဲဖန်တီးနိုင်သည့်အတွက်ကြီးမားသောအရာဖြစ်သည်။ ထည့်သွင်းထားသောတင်းပလိတ်များသည်လည်းကောင်းမွန်သောထိတွေ့မှုဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Moosend ကိုပေါင်းစည်းနိုင်သည် Magento, WooCommerce နှင့် Zapier စသည့်ကျော်ကြားသောပလက်ဖောင်းများဖြင့်ပလက်ဖောင်းသို့ပိုမိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။
အသုံးပြုသောကုမ္ပဏီများအများစု အီးမေးလ်စျေးကွက် အနည်းဆုံးအားဖြင့်သူတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်သူတို့၏ပြိုင်ဘက်များထက်ကြီးမားသောအားသာချက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
စာရင်းအပိုင်းအစ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုဒီလောက်အောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ ဒီနေ့စားသုံးသူတွေဟာဆီလျှော်တဲ့စီးပွားရေးမက်ဆေ့ခ်ျတွေနဲ့ထိုးနှက်တာကိုမခံချင်ကြဘူး။ လူတိုင်းကအရာရာတိုင်းကိုကြားချင်ကြတာမဟုတ်ဘဲစာရင်းပေးသွင်းသူစာရင်းနှင့်အတူအောင်မြင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့မတူညီတဲ့စာရင်းများဖြင့်ခွဲခြားခြင်းဖြစ်သည်။
ဦး ဆောင်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်အီးမေးလ်စျေးကွက်ကိုအသုံးပြုခြင်း။ ဤကဲ့သို့အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအလေ့အကျင့်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဦး ဆောင်သူအားချက်ချင်းပြောင်းလဲရန်မဟုတ်ဘဲနောင်အနာဂတ်တွင်သူ့ကိုပညာပေးရန်နှင့်သူ့ကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုခြင်း marketing ကို Automation အချိန်ပို (သို့) လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစရာမလိုဘဲကုမ္ပဏီ၏ကောင်းကျိုးရလဒ်များကိုများပြားစေနိုင်သည်။ ဒီအလေ့အကျင့်များရှိသည်သောအီးမေးလ်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် အလိုအလျောက်အစပျိုး တူသောတိကျသောဖြစ်ရပ်များပြီးနောက် လှည်းစွန့်ခွာ or ကြိုဆိုပါတယ်အီးမေးလ်များ.
Moosend သည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောကုမ္ပဏီများအတွက်တာဝန်ယူသည် အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှအသုံးချနိုင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
Moosend ဟာသူတို့ကတိပေးထားတဲ့အရာအားလုံးပါ။ ဆက်သွယ်မှုသည်အလွန်ကောင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Moosend အကောင့်မန်နေဂျာနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအချိန်တိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုပြည့်မီစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအထက်နှင့်ကျော်။ ကျော်သွားပြီ။ အဆိုပါထုတ်ကုန်လည်းတကယ်ကိုအလိုလိုသိနှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ ငါ ESP အသစ်ရှာဖွေနေသည့်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမဆို Moosend အလုံအလောက်မပေးနိူင်ပါ။
CareerBuilder မှ Anthony Rigby
ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်၌ software ထုတ်ကုန်များ သူတို့ကုမ္ပဏီများအတွက်ပို။ ပို။ လိုအပ်သောဖြစ်လာအဖြစ်ရှင်သန်။ ပြိုင်ဘက်များနှင့်ကွဲပြားစေရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ယခုအခါ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအားကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုထက်ပိုပြီးပေးရသည်။ ထွက်ရှိသည့်အအောင်မြင်ဆုံးကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းသို့တန်ဖိုး၊ ဗဟုသုတနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုဖြန့်ဝေပေးသည်။
စားသုံးသူများသည်သဘာဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်လှမ်းပြီးရိုးရှင်းသောစကားလုံးများကိုမယုံကြတော့ပါ။ ယင်းအစားသူတို့သည်ရှာဖွေနေကြသည် ထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းမှတိုးချဲ့သောတန်ဖိုးများ (ဒီအရာတွေဟာအရေးမကြီးတော့ဘူးလို့မပြောဖို့)
Moosend အဲဒါကိုသူတို့သိတယ်။ သူတို့အသိုင်းအဝိုင်းမှာသူတို့နဲ့အတူပါ ၀ င်မှုအပေါ်အများကြီးအာရုံစိုက်ရတာပေါ့ အမြဲတမ်း - ရရှိနိုင်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုသူတို့၏ ကျယ်ပြန့်သောအကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးခေါင်းစဉ်နှင့်၎င်းတို့၏အထောက်အကူဖြစ်စေသေးအခမဲ့ tools များအပေါ် တူ အခမဲ့ဘာသာရပ်လိုင်းစမ်းသပ်သူ.
ဂျော့ခ်ျက တိုးတက်မှုစျေးကွက်တွဲဖက် အတွက်အလုပ်လုပ်သည် Moosend ၏အီးမေးလ်အလိုအလျောက် software ကို! သူသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်သူနေ့စဉ်လေ့လာစူးစမ်းခြင်းတွင်သူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းများအကြောင်းရေးသားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ သူကအမြဲတမ်းအတွေ့အကြုံများနှင့်အတွေးအခေါ်များအကြောင်းပြောဆိုရန်စိတ် ၀ င်စားပါသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်သင်၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဗဟုသုတများဝေငှရန်စာတစ်စောင်ပို့ပေးပါ။